Imveliso yeFloves nePlavelisi yeTshayina ePhilayo yeTshayina | Zhongmaohua
Iiglavu ezilahliweyo zePVC ziigloves zeplasitiki ezilahlayo, ezizona mveliso zikhula ngokukhawuleza kwimveliso yegloves. Abasebenzi bezonyango kunye nabasebenzi benkonzo yokutya bayayiqonda le mveliso ngenxa yokuba iigloves zePVC zikhululekile ukunxiba, zinokusebenziseka lula, azinazo naziphi na izithako ze-latex yendalo, kwaye azizukubangela iimpazamo.
Inkqubo yokwenza imveliso
Uvavanyo lwezinto eziluhlaza → Ukusetyenziswa kweekhola → ukuqhubela phambili → ukuvavanywa → ukujongwa kokugcina iifoto → ukuvavanywa → ukusetyenziswa kwamachiza → ukuntywila dr Ukukhupha → Ukucima ukomisa mold Ukucoca iplasitiki → ukufafaza kobushushu nokupholisa → ukumiswa kwePU okanye umgubo omanzi → ukuthoba → ukupholisa → Ukukhwela intombazana → Ukukhutshwa kwangaphambi kokususwa → Ukudalwa kwamanqanaba aMahluthwe ngokujongwa komhlaba → Uhlolo
Ubungakanani kunye nokusetyenziswa
Umsebenzi wasendlini, elekhompyuter, elekhemikhali, elenziwa emanzini, iglasi, ukutya kunye nolunye ukhuseleko lwefektri, izibhedlele, uphando lwezenzululwazi kunye namanye amashishini; isetyenziswa ngokubanzi kufakelo lwee-semiconductors, imvelaphi ye-elektroniki echanekileyo kunye nezixhobo kunye nokusebenza kwezixhobo ezinamathelayo zentsimbi, ukufakwa kobuchwephesha beemveliso eziphezulu kunye nokususa idrive Disc, izixhobo zomdibaniso, imitha yokubonisa ye-LCD, imigca yokujikeleza ibhodi yesekethe, iimveliso zamehlo, iilabhoratri, izibhedlele, ii-salons zobuhle kunye namanye amasimi.
Iigloves ezilahlayo zePVC (iifoto ezi-3)
Iindawo ezicocekileyo ezinjengee-semiconductors, ii-microelectronics, imiboniso ye-LCD kunye nezinye izinto ezibuthathaka, ezonyango, amayeza, ubunjineli bebhayoloji, ukutya nesiselo, njl.
1. Ukuthuthuzela ukunxiba, ukunxiba ixesha elide akunakubangela uxinzelelo lolusu. Ilungele ukuhamba kwegazi.
2. Ayinaqulanisi i-amino kunye nezinye izinto eziyingozi, kwaye kunqabile ukuba zibangele iallergies.
3. Ukomelela okumandla, ukumelana neepunis, kwaye akukho lula ukwahlukana nawo.
4. Ukutywina kakuhle, okusebenzayo kukuthintela uthuli ekubalekeni ngaphandle.
5. Ukuxhathisa kweekhemikhali kunye nokuxhathisa kwi-pH ethile.
6. Izithako ezingasimahla zeSilicone, ezineepropathi ezichasayo, ezifanelekileyo kwiimfuno zemveliso yombane.
7. Umgangatho weentsalela zeekhemikhali zomhlaba, ezantsi komxholo we-ion, kunye nomxholo wezinto ezincinci, ezifanelekileyo indawo ecocekileyo yegumbi.
Le mveliso ayinazandla sasekhohlo nasekunene, nceda khetha iigloves ezifanelekileyo kwisandla sam sokuchaza;
Xa unxibe iigloves, unganxibi amakhonkco okanye ezinye izinto, nikela ingqalelo kwizikhonkwane zokucheba;
Le mveliso ilinganiselwe ukusetyenziswa kwexesha elinye; emva kokusebenzisa, nceda uyiphathe njengenkunkuma yezamayeza ukukhusela iintsholongwane ekubeni zingcolise indalo;
Kuthintelwe ngokungqongqo ukufaka imitha yokukhanya ngokuqinileyo njengokukhanya kwelanga okanye imisebe ye-ultraviolet.
Iimeko zokugcina kunye neendlela
Ifanele igcinwe kwindawo yokugcina izinto ezipholileyo nezomileyo (amaqondo obushushu angaphakathi angaphantsi kwe-30 degrees kwaye umswakama ohambelana noko ungaphantsi kwe-80%) kwishelufa eyi-200mm ukusuka emhlabeni